Andron’ny Bilaogy 2005 · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Mey 2019 12:12 GMT
* Indray andro tamin'ny volana jona tamin'ity taona ity dia nahatsikaritra ilay bilaogera, Nir Ofir fa: toa mitovy hafahafa amin'ny teny hoe “Blog” ny daty 3108 (na ny 31 Aogositra). Nanjary miha-fantany hatrany ihany koa fa arakaraka ny hamaroan'ny tranonkala manerantany ao amin'ny aterineto, no mahatonga antsika hifikitra amin'ny fahazarantsika mamaky tsy mila fikarohana votoaty vaovao sy feo vaovao avy amin'ny kolontsaina sy ny fomba fijery hafa. Na eo aza ny resabe momba ny aterineto izay mahatonga izao tontolo izao ho toerana kely kokoa, mbola mampifandray amin'ireo bilaogera avy any amin'ny fireneny sy miaraka amin'ny fomba fijery ara-politika mitovy ny ankamaroan'ny tranonkala. Ny vahaolana avy aminy?
Misy ireo torolalana manokana momba ny fanomezana endrika ny lahatsoratra bilaoginao amin'ny teny Anglisy sy amin'ny fiteny 10 hafa.
Azo antoka fa efa nipoitra ilay hevitra ary efa voaresaka be manerana izao tontolo izao. SAJ Shirazi avy ao Pakistana nitanisa bilaogy tsy latsaky ny 124 izay antenainy tanteraka fa handray anjara amin'ny Blog Day amin'ny Alarobia hoavy izao. Satish Talim avy any Pune, India mandrisika ireo Indiana namana handray anjara. Aldebarán avy any El Salvador, Jordi Abad avy any Barcelone, Espaina, naevus’ corner avy any Italia, David Weinberger avy any Etazonia, ary Alexis Perrier avy any Parisy, Frantsa no ohatra vitsivitsy amin'ireo olona marobe manerana izao tontolo izao izay hampahafantatra amin'ireo mpamaky azy ny bilaogera vaovao avy amin'ny firenen-kafa.
Indrisy fa toa manakana ny ankamaroan'ny bilaogera Koreana tsy handray anjara amin'ny hetsika ny tsy fisian'ny fanohanan'ny Technorati ny tarehintsoratra mahazatra Koreana, EUC-KR. Tamin'ny taratasy ho an'i Nir Ofir, nanazava ny antony ilay bilaogera Koreana, Hof.
Na dia tsy nahasarika loatra teto Etazonia aza ny Andron'ny Bilaogy, nanipy teny momba izany ihany i Indianapolis Star tamin'ny herinandro lasa.
Izahay ato amin'ny Global Voices, mazava ho azy, dia tena manohana tanteraka an'io hevitra io. Efa hatry ny ela izahay no nandrisika ny bilaogy fampifandraisana, izay andraisana ny tranonkala ho tetezana eo amin'ny vondron'olona roa, indrindra avy amin'ny firenena sy kolontsaina samihafa. Ny 31 Aogositra dia manamarika andro iray ahafahantsika rehetra mandray anjara amin'ny fitadiavana bilaogy vaovao avy any ivelany ary mampahafantatra azy ireo amin'ny mpamaky antsika mahazatra. Raha mitady toerana tsara hanombohana fandalinana ianao, tsy misy tsara kokoa noho ny Bridge Blog Index.